Bruno Mars Yevacheche Nhau Plus Untold Biography Facts
musha nyika dzakabatana Singers Bruno Mars Yevacheche Nyaya uye Untold Biography Chokwadi
CB inopa Nyaya Yakazara yeAmerican Musical Celebrity anozivikanwa chaizvo sa “Bruno Mars". Yedu Bruno Mars Childhood Nhau pamwe neS Untold Biography Chokwadi inounza kwauri nhoroondo yakazara yeanozivikanwa zviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino.
Ehe, munhu wese anoziva nezve ake anoshamisa masiteji zvesimba uye retro showmanship. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga Bruno Mars 'biography iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Bruno Mars Upenyu hwepakutanga uye Yepamberi Yemhuri:
Kutanga kubva, Peter Gene Hernandez akaberekwa pazuva re8th saGumiguru 1985 kuHonolulu, Hawaii. Ndiye mwana wechina pavana vatanhatu, akaberekwa mumubatanidzwa pakati paamai vake Bernadette San Pedro Bayot nababa vake, Peter Hernandez.
Nyika yeAmerican yenyika yedzinza rakasanganiswa nePuerto Rican, Ashkenazi Jewish, Philippines, neSpanish midzi yakakurira muHonolulu Hawaii kwaakakurira pamwe nevanun'una vake vashanu; Eric, Jamie, Presley, Tahiti, naTiara Hernandez.
Kukura muHonolulu, Bruno Mars, ane vabereki vaive nyanzvi dzekuridza, akaoneswa mimhanzi dzakasiyana siyana. Iye akabva atanga kufarira hunyanzvi hwemimhanzi uye ainyanya kuda kuita zvemitambo sezvo aipedza nguva yake yakawanda achitevedzera Elvis Presley.
Bruno Mars Dzidzo Uye Basa Kuvaka:
Nezve kumashure kwedzidzo yaBruno Mars, akaenda kuMutungamiri Theodore Roosevelt Highschool uye aive nehunyanzvi zvakanyanya kuti anenge munhu wese muchikoro chake akakwezvwa nehunhu hwake hunonakidza.
Ndichiri kuchikoro, Bruno Mars uyo aisada kurega tarenda rake kuti rirambe rakarara uye risina zvibereko akabatana neboka rakanzi "Mukomana weChikoro". Aiwanzoita pakuratidzira kwakasiyana neboka uye aipedza chikoro cheRoosevelt High muna 2003 aine makore gumi nemanomwe.
Bruno Mars Yekutanga Basa Rehupenyu:
Nguva pfupi apedza kudzidza kuHigh School, Bruno Mars akatamira kuLos Angeles, California kunotevera basa remimhanzi. Iye akabva atora zita rezita rekuti "Bruno Mars" raakagadzira kubva kuzita remadunhurirwa - Bruno - baba vake vakamupa pakuzvarwa.
Pakasvika nguva Bruno Mars asvika kuLos Angeles, akaita gadziriro uye gadziriro dzaizomubatsira kubudirira pabasa rake remimhanzi. Pasina chinguva apedza kuita hurongwa hwake hwese, akasayina chibvumirano neMotown Records mu2004.
Bruno Mars Road To Fame Nyaya:
Kusayina chibvumirano chebvumirano neMotown Records hakuna kuzobudirira sekufungidzira kwakaita Bruno Mars. Akaenderera mberi achisangana nevatungamiriri vaWill.i.am kuti vaite hurukuro iyo yakazoratidzawo kuti haina zvibereko.
Kunyangwe kuedza kwaBruno Mars kwaive kusine zvibereko paive neMotown Records, akave nerombo rekusangana nemunyori wenziyo uye mugadziri Philip Lawrence uyo akasainawo kunzi. Akazodonhedzwa nechiratidziro isingasviki gore mushure mekusainwa.
Bruno Mars Kukwira Kumukurumbira Nhau:
Mushure mekunge Bruno Mars adonhedzwa neMotown Records, akaramba ari muLos Angeles ndokusaina chibvumirano chekutsikisa mimhanzi neAmerican mugadziri Steve Lindsey naCameron Strang kuWestside Independent muna 2005. Makore mashoma gare gare, Bruno Mars akaburitsa dambarefu redamba redamba rake rakanzi " Doo-Wops and Hooligans (2010) ”, iyo yakakwira nhamba yekutanga muUS, Canada, UK, nedzimwe nyika dzinoverengeka pasi rese.
Nekukurumidza kumberi kusvika parizvino, Bruno Mars ndomumwe wevatengesi vepasirose-vatengesa venguva dzese nemubatanidzwa wake wazvino asina kuroorwa naEd Sheeran naChris Stapleton anonzi "Blow" akaburitswa pazuva re5th raJuly 2019, vamwe vese, sekutaura kwavo , inhoroondo.
Bruno Mars Hukama Hupenyu:
Bruno Mars haasati acharoora panguva yekunyora. Tinokuunzira chokwadi nezvenhoroondo yake yekufambidzana uye iye zvino hukama. Kutanga nenhoroondo yake yekufambidzana, Bruno mars ave achibatanidzwa kune vasiri vashoma pane vakadzi vashanu kubva pakutanga kwebasa rake.
Ane tarenda rekuAmerica muimbi akambotamba muimbi weKosovar, Rita Ora paakatorwa basa kuti amunyorere nziyo pakati pe2009 na 2011. Aive zvakare muhukama nemutambi weAmerica, Chanel Malver panguva imwe chete iyoyo. Hukama hwake naChanel hwakazopera paakangoziva kuti aive achidanana naRita waaishanda naye panguva iyoyo. Mushamarari wekuAmerican hurukuro show, Rocsi Diaz, naAmelle Berrabah vakatorwawo runyerekupe rwekuti vakaita chibvumirano naBruno Mars muna 2011.
Bruno Mars akazove nehukama naJessica Caban pazuva re22nd reJune 2011 mushure maizvozvo vaviri vacho vakaita chibvumirano pazuva re26th raDecember 2016. Nezvehukama hwake panguva yekunyora, Bruno Mars anogona kunge asina kuroora sezvo pasina nhau dzazvino zvakanzwika nezvehukama hwake naJessica Caban.
Bruno Mars anobva kune yepamusoro-boka remhuri kumashure. Tinokuunzira chokwadi nezvehupenyu hwemhuri yake.
Nezve baba vaBruno Mars:
Peter Hernandez ndibaba vaBruno Mars. Akazvarwa muBrooklyn, New York uye akapedza makore ake ehudiki ipapo. Iye muimbi wevose vechiJuda nevePuerto-Rican midzi uye anoonekwa kunge akaita basa rakakosha mukukudza tarenda remwana wake.
Nezve amai vaBruno Mars:
Bernadette San Pedro Bayot aive amai vaBruno Mars. Iye akazvarwa pazuva re14th raAugust 1957 uye anobva kuManila muMetro Manila, Philippines. Panguva iyo Bernadette aive nemakore gumi, vabereki vake vakamutumira kuUS kunogara naambuya vake vaive mugari weUSA uye aigara muHawaii. Paaive muHawaii, akatanga kufarira kutamba kwaakazova shasha uye akazove nyanzvi Hula mutambi.
Aiwanzoita kumakonzati emabhendi emuno kwaaisangana nemuridzi wengoma - Peter Hernandez - waakadanana naye uye akaroora naye. Imba yavo yakamutsa vana vatanhatu vakanaka asi yakazopunzika zvichitevera kurambana kwaBernadette nemurume wake, Peter. Muna 2013 Bernadette akafa zvisingatarisirwi nehuropi aneurysm, njodzi yakasiya nhengo dzemhuri yake dzichishamisika.
Nezve hama dzaBruno Mars:
Bruno Mars ane vanin'ina vashanu (mukuru mukoma, vaviri vakuru hanzvadzi uye vaviri vadiki hanzvadzi). Mukoma wake mukoma Eric Hernandez zvakare muimbi ane tarenda anoita pamwe naBruno Mars semuridzi wengoma. Mukoma wake wedangwe Jaime Kailani Bayot muimbi, mutambi wechokwadi weTV, mukadzi wemabhizimusi uyezve muvambi wesangano rerunako "Mama Pasi". Mukoma wake mukuru Tiara uye wechidiki hanzvadzi Presley zvakare vane tarenda mimhanzi maartist uye inhengo dzemhuri bhendi "The Lylas". Munin'ina waBruno Mars, Tahiti zvakare muimbi anomuda zvakanyanya uye anogara achitenda kuva naye mumhuri yavo.
Nezve hama yaBruno Mars:
Kure kubva kumhuri yepedyo yaBruno Mars, vanasekuru naamai vake ndiFabiana Sebastiana Vazquez Garcia naAlmecio Hernandez Aquino apo ambuya nasekuru vake Mildred Dubov naRomeo Amando Maria Eugene Herranz Bayot zvichiteerana. Hazvisi zvakawanda zvinozivikanwa nezve babamunini nasekuru pamwe nababamunini vake.
Bruno Mars Hupenyu hweMunhu:
Chii chinoita kuti Bruno Mars afare? Gara kumashure apo isu tinokuunzira iko kugadzirwa kwehunhu hwake kuti akubatsire iwe kuti uwane izere mufananidzo wake. Kutanga, Bruno Mars 'persona musanganiswa weRibra zodiac maitiro.
Iye ane tarenda rakawanda matarenda akaita basa rekubatsira neAmerican Red Cross, Candies Foundation uye Global Citizen kutaura mashoma. Zvaanofarira uye zvekunakidzwa zvinosanganisira; kubheka, fashoni, zvishandiso, macheke uye imbwa.
Bruno Mars Mararamiro:
Bruno Mars ane mari inofungidzirwa inosvika zviuru gumi nemashanu zvemadhora panguva yekunyora. Kwaakabva hupfumi hwake kunobva zvakanyanya kubva mumimhanzi yake yekuedzesera uye kupedzisa anoita nemhando dzakadai seChromatik, NJOY, uye Pepsi apo ongororo yemashandisiro ake emari inoratidza kuti anorarama hupenyu hwoumbozha.
Kutanga nezvinhu zveBruno Mars, iye ane yake 2-Acre Estate muStudioCity, California iyo inokosha mari inokwana emadhora 6.5 mamirioni. Imba yacho inosanganisira yekupinda nhurikidzwa mbiri, gomba, imba yemhuri ine bhawa yakanyorova, imba yekutandarira yakavharwa, dziva rekushambira risingaperi rine spa, nhandare yevana uye kupaka mota gumi nembiri
Uye zvakare, mugadziri uyu awanawo mota dzemhando yepamusoro dzinosanganisira; iyo Rolls Royce inodhura anofungidzirwa kuita $ 289,000, Cadillac XTS yakakosha pakati pe $ 72,000- $ 92,000 uye yeAllante Cadillac inodhura $ 54,000. Iye zvakare ane yakavanzika Jet zita, Mars Rider yakakosha mari inofungidzirwa yemadhora 40 mamirioni.
Bruno Mars Untold Chokwadi:
Kupedza yedu Bruno Mars yehucheche nyaya uye biography pano ndidzo dzisina kutaurwa kana zvishoma-dzinozivikanwa iwe dzausina kumboziva nezvake.
Bruno Mars akatumidzwa zita rekuti "Bruno" nababa vake nekuti aive mucheche anonamira. Baba vake vakatora zita rekuti "Bruno" kubva pazita remutambi wewrestling Bruno Sammartino uyo waaida kwazvo mutsimba.
Bruno Mars muKristu uye pamwe muKatorike. anotsigira kutenda kwake muna Mwari wamasimba ose uye nokushingairira anorarama nemararamiro ake ekutenda kwechiKristu.
Bruno Mars ane matatu matatu; anchor, gypsy uye maviri pamaoko ake ekumusoro, ayo akatsaurirwa vabereki vake. Paruoko rwake rwerudyi rwepamusoro pane zita raamai vake vanononoka, Bernadette, rakanyorwa mumoyo, uye kuruoko rwake rweruboshwe kune mazwi "Mukomana waPete" semutero kuna baba vake.
Bruno Mars anosvuta uye anonwa. Adele anga ataura kuti anorova kunge mukadzi pavaive vachishanda pamwe chete uye nevanhu vane izwi rakanakisa kuputa.
Thanks for reading vedu Bruno Mars Childhood Story plus untold biography zvinyorwa. At childhood biography, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!